သက္က်လီးဒ် ဘာကြောင့်လဲ… ?အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
သက္က်လီးဒ် ဘာကြောင့်လဲ… ?
ဇနျနဝါရီ ၂, ၂၀၁၆ - ၁၁:၁၅ ညနေ
News Code : 728310
သက္က်လီးဒ် ဘာကြောင့်လဲ… ? ဆိုတာကို အောက်ဖော်ပြပါ စကား အခြေအတင်လေးကို လေ့လာပြီး သိနိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး … ခွမ်းစ်ပိုက်ဆံ ၁၀ သိန်းယူလိုက်ပါ…. ဗျား..
ကောင်းပြီးလေ… စဲဟ်မေအေမာမ်(အ.စ) တစ်ခုတည်းလား (သို့) စဲဟ်မေဆဒါသ်ကော်ဘဲလား…
ဒီမှာကြည့်ပါ…ဆရာ ကျွန်ုပ်ကတော့ သက္က်လီးဒ် ကိုလက်မခံဘူးနော် ... ဒါပေမဲ့ ခွမ်းစ်ပိုက်ဆံ ကတော့ နှစ်ခုစလုံးပါ...ဘဲ
ခင်ဗျားကဘာကြောင့် သက္က်လီးဒ် ကိုလက်မခံ ရတာလဲဗျား...?
အိုဗျား… ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ကိုမြတ်အလ္လာဟ် ချပေးထားပြီးပြီဘဲ … ဟဒီးစ်တော် တွေ လည်း ကျမ်းဂန်တွေမှာ ရှိနေတာဘဲလေ… ဒါကြောင့်…ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သက္က်လီးဒ် မှမလိုတော့ တာ..
သက္က်လီးဒ် ဆိုတာကတော့ မောင်လာနာ တွေကကျွန်ုပ်တို့ အပေါ်အာဏာပြခြင်းတာ အုပ်ချုပ်ခြင်း တာနဲ့ အကြောင်းပြချက်အဖြစ်လုပ်ထားတာပါ... သက္က်လီးဒ်ဆိုတာ ဒီမောင်လာနာဆပ်တွေရဲ့ အေဂ်ျသေဟာဒ်ပါဘဲ… ဤအတွက်ကြောင့်လည်း … အေဂ်ျသေဟာဒ် ကိုကျွန်ုပ်ဆန်ကျင့် တာပေါ့…ဗျား …
အံ့ပါဗျား…ခင်ဗျားလိုစာတတ်ပေတတ် တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး အသိဥာဏ်ကိုအသုံးမပြုဘူးဗျား …
ဒါကြောင့်ခင်ဗျားအစ္စလာမ်ရန်သူများခင်းထားတဲ့ ထောက်ချောက်မှ မိပြီးတော့ ကိုယ့်တမလွန်ကိုယ် မပျက်စီးပါနဲ့ဗျား … မြတ်အလ္လာဟ်ခင်ဗျား အပေါ် သနားကြင်နာပါစေဗျား… ကျွန်ုပ်ပြောတာကို ခင်ဗျားနားထောင်မယ် ဆိုရင်… ပြောပြပါမယ် …
တိုတိုနဲ့ အကျဉ်းပြောဗျား ..ကျွန်ုပ်ကမောင်လာနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဆို စိတ်ပျက်လွန်လို့ …
အေဗျား. …နားထောင် …ကြည့်ပေါ့ … အီရန်နိုင်ငံအစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးနောက် အစ္စလာမ်ရန်သူများအနေဖြင့် ဒီအောင်ပွဲဟာ သက်္ကလီးဒ်ကြောင့်ဆိုတာ …ရိပ်မိခဲ့ကြတယ်လေ… သက်္ကလီးဒ်နဲ့ရှီအာတွေကိုဝေးအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတော့တာပေါ့…အီရန်နိုင်ငံ အစ္စလာမ်မစ် တော် လှန်ရေးမတိုင်မှီကကော်ပြီးနောက်ကော် အေဂ်ျသေဟာဒ် ကိုအသုံးပြုပြီး ပြဿနာအသစ်အဆန်း တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်…ဒီအချက်ဟာ အစ္စလာမ်ရန်သူတွေကို အရှုးဖြစ်စေတဲ့အချက်ပါဘဲ… ဒါကြောင့်လည်းသူတို့တွေက အေဂ်ျသေဟာဒ် နှင့်သက်္ကလီးဒ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆန်ကျင့်ရေးကိစ္စမှအစွမ်းကုန် (ငွေအင်အား၊ကာယအား၊ ဥာဏ်အားတွေ) သုံးတော့တာပေါ့…ရလာဒ်ကတော့ဗျား… ရိုးသား ဖြူစင်တဲ့မိုမင်တွေ၊ဘာသာရေးအသိပညာနည်းတဲ့ မိုမင်တွေပါ အေဂ်ျသေဟာဒ်နဲ့သက်္ကလီးဒ် ကို ဆန်ကျင့်အထင်လွဲလာ ပါလေရော… အော် အစ္စလာမ်သာသနာ့ ကမျက်ကန်းသက်္ကလီးဒ်ကို လက်မခံဘူးဆိုတာလည်း မမေ့ဖို့လို့တော့လိုတယ်နော်… မွတ်စလင်ဖြစ်တဲ့ လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လေ… မြတ်အလ္လာဟ် ၏အမိန့်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင် ကြိုးစားရမယ်လေ…ဒါမလုပ်နိုင်ရန် တော့ ဗျား အဟ်သေယာသ် ဆိုတာကို ကျင့်သုံးရမယ်လေ… အဟ်သေယာသအပေါ် ကျင့်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပါ…နောက်မဖြစ်နိုင်ဖို့နီးပါးပါဘဲဗျား…ဒါဆို အေလ်မ် အများကြီးရှိတဲ့သူဆီက အဟ်ကမ်မေရှရီအသ်ကို သိအောင်လုပ်ကာ လက်တွေ့ ကျင့်ဖို့ဆို သည့် တစ် လမ်းသာကျန်တော့တာပေါ့ဗျား...လေကီပညာအရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျား … လူတိုင်းရောဂါဘေးကနေဝေးဖို့ နည်းလမ်းတွေကိုသိထားဖို့လိုတာပေါ့.. မသိထားရင်တော့ အဟ်သေယာသ် ကိုသုံးပြီး ရောဂါဘေးကိုဖြစ်စေမဲ့ အရာမှန်သမျှကိုရှောင်ကြဉ်ကြမှာပေါ့ဗျား … ဒီအလုပ်ကလဲတော်တော်ခက်တာဗျား၊ယေဘုယျအားဖြင့်လူအတော်များများ အတွက်မဖြစ်နိုင်တာ ကပိုများနေပါတယ်…လေ…ဒါဆို သူဆီမှာဆရာဝန်ကောင်းကောင်းလေး တစ်ယောက်ဆီ သွားပြီးသူ၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းနေဖို့ဘဲကျန်တော့တယ်လေ..ဒါကိုသက်္ကလီးဒ်လိုခေါ်တာပေါ့ … သက်္ကလီးဒ်လုပ်ရင်လေ … မင်္ရဂျာရဲ့လက်ပေါ်လက်ထပ်ပြီး ဘိုင်အသ်လုပ်ဖို့ မလိုဘူးလေဗျား …. မရ်ဂျာ၏လမ်းညွှန်ချက်များ (၎င်း၏သောင်ဇီးဟိုလ်စဆာအေလ် ) အပေါ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ ဘဲလိုပါတယ်..
နောက်သက်္ကလီးဒ်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်သူဘယ်မရ် ဂျာ၏ သက်္ကလီးဒ်လုပ်ပါတယ်လို့ ပြောဖို့ မလိုအပ်ချေ။ ဒါဆို မောင်လာနာ တွေကကျွန်ုပ်တို့ အပေါ်အာဏာပြခြင်းတာ အုပ်ချုပ်ခြင်း တာ မဖြစ်တော့ဘူးလေဗျား....
ဒီ အဟ်သေယာသ် ကြောင့် လဲ အီရန် နယ်ချဲ့တွေလက်အေညက်က လွတ်မြောက်ခဲ့ရတာပေါ့ …. ဗျား …
ကယ်ကယ် … ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ကိုမြတ်အလ္လာဟ် ချပေးထားပြီးပြီဘဲ … ဟဒီးစ်တော် တွေ လည်း ကျမ်းငယ်တွေမှာ ရှိနေတာဘဲလေ .. ဤအတွက်ကြောင့် သက်္ကလီးဒ် လိုလားဆို တဲ့မေးခွန်းကို ဖြေရမည်ဆိုလျှင် …
ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာပေတွေ ရှိနေလျက် ခင်ဗျားကို အတွက် ဒေါက်တာ လိုသေးတယ်လေ…
ဒီအတိုင်းဘဲပေါ့ဗျား … ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် နဲ့ ဟဒီးစ်တော်များရှိနေလျက် မရ်ဂျာယေ သက်္ကလီးဒ်လိုအပ်တာပေါ့ .. ကယ်ကယါဒီလောက်ဆို အကျဉ်းအဖြစ်ပြေပြရတာ လုံလောက် ပါပြီး…လေ…
ဟာ…ကျေးဇူးဘဲဗျား ခင်ဗျားကတိုတိုလေးနဲ့ သေချာရှင်းပြလိုက်တာဘဲ … ကျွန်ုပ်ကတော့ အစ္စလာမ်ရန်သူများ၏ လုပ်ကြံထားသည့် အကြောင်းအရာများကြောင့် အသိဥာဏ်ကို တောင် မသုံးဖြစ်ဘဲသက်္ကလီးဒ်ကိုစော်ကားမိသွားတာပေါ့…အခုမှဘဲ သေချာနားလည်တော့တဲ့ဗျား …ကျေး ဇူး အလွန်တင်ပါတယ်ဗျား …
ဆယသ် ဟိုစိန်ဟိုင်ဒဲရ် ရဇဝီး